Yemen:Dersinno Maydad ah oo Laga Heley Xeebta Yaman - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Yemen:Dersinno Maydad ah oo Laga Heley Xeebta Yaman
17.12.2007 | War-Saxaafadeed, Yemen, Abyan iyo Shabwa
Kooxaha MSF oo heley 56 dhintey, oo daweeyeyna 50 qof oo ka soo badbaadey safarka halista badan ee Soomaaliya looga yimaado iyada oo badda soo marayo
Nayroobi, Disembar 17, 2007 – Koox ka tirsan Médecins Sans Frontières (MSF) oo gargaareysa qaxootiga iyo muhaajiriinta ka soo gudba Gacanka Cadan ayaa meydad 56 ah ka heley meel u dhow Carqa oo ee xeebta Yaman ah maalintii Sabtida oo ay bisha Disembar 15ka ahayd.
Markii ay kooxda MSF timid subaxnimadii, waxaa ay markii hore xeebta ka heleen 49 qof oo soo badbaadey, oo 10 ka mid ahi ay haween ahaayeen. Meel halkaa ka sii shisheysa ayaa waxaa yaallay maydad dersinno ah oo ay badda ku soo caaridey dhul dhererkiisu gaarayo shan kiilomitir oo xeebta ah. Kooxdu waxa ay tirisey 56 qof oo dhintey, oo in ka badan kalabar ay ahaayeen haween. Waxaa sidoo kale ka mid ahaa shan carruur ah, oo qaarkood ay aad u da’ yaraayeen. Kuwa soo badbaadey ayaa u sheegey kooxda MSF in doontii ay ku soo safrayeen ay degtey iyo in dad badan oo saarnaa ay ku xayirmeen meelihii ay ku jireen. Sidaa daraaddeed, waxaa ay u badan tahay in ay dad kale oo badan ay dhinteen.
Dadkii dhibaatadaa ka soo badbaadey ayaa sheegey in ay doon kaga soo safreen Boosaaso, Soomaaliya, waqti ay ugu badan tahay in ay ahayd 12kii Disembar. Doon caagga loo yaqaan fibreglass ka sammeysan oo dhererkeedu ku dhow yahay 8 mitir ayaa waxaa laga soo buuxiyey 148 qof, oo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan. Waxaa jirey haween tiro badan (ku dhowaad 40) iyo carruur (ugu yaraan shan ah, oo kan ugu yar uu siddeed bilood jirey). Intii ay safarka ku soo jireen rakaabku ma haysan cunto ama biyo. Waxaa jirey ugu yaraan 20 qof – oo dhamaantood ay Itoobiyaan ahaayeen – oo ku jirey godka hoose ee doonta. Ugu yaraan afar qof ayaa u dhintey xaaladihii xumaa ee la soo gudboonaadey intii ay ku soo jireen safarka.
Dadkii soo badbaadey ayaa sheegey in ay doontu timid qiyaastii habeen-barkii ayna istaagtey meel ka fog xeebta. Rakaabkii ayaa lagu khasbey in ay ku boodaan biyaha. Markii ay diideenna xoog ayaa loo garaacay. Jahawareerkii arrintaa ka dhashey, ayaa dhaliyey in ay dadku isugu tagaan hal dhinac sidaa ayaana ay ku degtey doontii.
Kooxda MSF ayaa xeebta kula kulmey dad badan oo madluunsan oo doondoonaya qaraabadoodii. Nin 25 jir Soomaali ah oo reer Marka ah ayaa sheegey in uu halkaa ku waayey oo ay dhinteen xaaskiisa, laba carruurtiisa ah, iyo laba qof oo kale oo qaraabadiisa dhow ah. “Wax kale oo ii furan ma jiraan” ayaa uu yiri qof kale oo Soomaali ah oo reer Muqdisho ah. “Xataa aan badda ku dhintee waxaan u bahanahay in aan gaaro Yaman. Waxaa laga yaabaa in aan helo fursad aan ku badbaado, laakiin haddii aan Muqdisho ku noqdo waan dhimanayaa.”
Shaqaalaha MSF waxa ay gargaar cafimaad siiyeen dadka soo badbaadey, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ahi ay qabeen dhaawacyo dooxan oo jirkooda ku yaalley. Kooxda ayaa dhayey 30 dhaawac waxaana ay qaybiyeen cunto iyo agab kale oo gargaar. Waxaa ay sidoo kale la-talin iyo u-dhimrin siiyeen dadkii soo badbaadey; qaar badan oo ka mid ah ayaa halkaa ku waayey laba qof ama ka badan oo qaraabo dhow ama saaxiibbo la ahaa.
MSF waxa mashruuceeda ay Yaman ka bilowdey Sebtembar 2007dii, iyada oo gargaar caafimaad iyo mid bani’aadamnimo siineysa qaxootiga, iyo muhaajiriinta imanaya xeebta Yaman ee gobollada Abyan iyo Shabwa. Ilaa bilowgii 2007dii, 27,960 qof ayaa yimid Yaman, iyaga oo xaalado aad u halis badan kaga soo gudbey Gacanka Cadan. Ugu yaraan 593 qof ayaa dhintey iyaga oo isku dayaya in ay soo gaaraan Yaman waxaana lagu soo warammey in 659 qof la la’ yahay.
Tags: Gacanka Cadan, meedad, qoxoti, tahriib, Yemen